Shiinaha Matte dareeraha dareeraha ah ee gaarka loo leeyahay ayaa sameeya warshad wax iibisa iyo kuwa alaabada keena Qurxinta Iris
Matte calaamadda dheecaanka khafiifka ah ee gaarka loo leeyahay ayaa sameeya mid kuu gaar ah oo iibiya lipstick vegan jumlo ah
Lipstick-ka Matte Liquid ee waara iyo biyuhuba. Mashiinka lipstick-ka oo aad u dheereeya waxaa ku jira maaddooyin qoyan oo loogu talagalay raaxo iyo xiiq jilicsan oo aan qallajinayn bushimahaaga.
Ku lipstick dareere mattewaa midab aad u sarreeya oo soo bandhigaya saameyn jilicsan oo jilicsan. Isla mar ahaantaana, lipstick-ga dareeraha cufan leh waxaa ku jira maaddooyin qoyan si ay u keenaan nuur iyo xiiq jilicsan si ay bushimahaagu u noqdaan kuwo dhalaalaya oo soo jiidasho leh.
Astaamaha lipstick-kan ayaa ah kuwo aan dheg dheg dheereyn karin, muddo dheer soconaya, Khudrad, biyo-la'aan iyo dhunkasho la'aan.
Lipstick waa qurxin lagama maarmaan u ah nolol maalmeedkaaga, taas oo iftiimin karta midabka maqaarkaaga. Tanilipstick matte waxaa lagu heli karaa midabbo badan, mid walboo ku habboon maqaarka iyo qurxinta kala duwan, waxaad u isticmaali kartaa si fudud. Mid dooro hada oo abuur quruxdaada shaqsiyeed.
Magaca Shayga Lipstick Liquid Liquid ah
4.Long waarta / biyuhu
5.Waxay kujirtaa Fiitamiinada / Shea butter
Hore: Dheecaannada dareeraha ah iyo kuwa liner-biyoodka ah waxay dejiyaan jumlada liner-biyoodka caadada ah iyo bushimaha dhalaalaya ee loo dejiyo xirmada bushimaha matte calaamadda khaaska ah ee lipstick
Xiga: faruur dhalaalaya iibiyaha calaamadda khafiifka ah ee bushimaha dhalaalaya dhalaaladiisa samee samee khadka tooska ah ee dhalaalaya bushimaha dhalaalaya dhalaalaya
lipstick sumadda gaarka loo leeyahay
lipstick dareere sumad gaar ah
sameyso lipstick kuu gaar ah
lipstick dareere matte
matte calaamadda lipstick dareere gaar ah
Astaanta khaaska ah ee loo yaqaan 'lipstick' gaarka ah ee naxariis darada dabiiciga ah ...
lipgloss caadadii jumlada glos bushimaha midab logo ...
Iibiyaha Lipgloss sumadda gaarka loo leeyahay ee bushimaha dhalaalaya ...
Lip liner calaamadda khaaska ah naxariis darro log caadadii free ...
bushimaha iibiyaha gloss calaamadda gaarka loo leeyahay bushimaha glos ...
Libaarta dareeraha ah iyo liner liner-ka ayaa cus loo dhigay cus ...